Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qaallittiitti geeffamuun isaanii dhaga’ame. | Kichuu
Posted on January 18, 2021 by kichuu_admin
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa kaleessaa mana hidhaa Qilinxootii butamanii halkan edaa bakka hin beekamne tursiifamuun guyyaa har’aa gara mana hidhaa Qaallittiitti geeffamuun isaanii dhaga’ame.
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa kaleessaa akkuma mana Murtiitii dhaddacha isaanii xumuratanii deebi’aniin Mana Hidhaa Qilinxoo keessaa humna Tikaatiin ukkaamfamanii fudhamuu isaanii odeeffannoon marsaa Hawaasummaarra naanna’a tureera.
Erga mana hidhaa Qilinxootii fudhatamanii bakki isaan geeffaman wallaalamee maatiin rakkachaa kan turan yoo ta’u, guyyaa har’aa gara Mana Hidhaa Qaallittii Zoonii 8ffaa keessa galfamuu isaanii maddeen ijaan argan OMN-tti himaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo poolisootaan qabamee gara mana hidhaa Qaallittii seenu ijaan arguu kan himu, namni maatiisaa dubbisuuf gara Zoonii 8ffaa deemee ture tokko, Koloneel Gammachuu haalli isaanirraa mullatuufi fuulli isaanii waan baayyee miidhaman fakkaata jechuun tilmaamasaa OMN-tti himeera.
Namni kan biraan OMN-tti bilbilaan hime ammoo “Koloneel Gammachuu yeroo ammaa kana mana hidhaa Qaallittii zoonii 8ffaa keessaa bakka Dajanee Xaafaafi eegdonni Obbi Jawaar Mohammad jiranitti hidhamee jira. Maatii dubbisuuf achi deemee yeroon waa’eesaa dhaga’etti maal irra akkanni jiru amma tokko odeeffadheera. Yeroo ammaa kanatti Koloneel waldhaansa fayyaa ga’aa akka barbaadanis hidhamtootatti himataniiru. Qaamnisaanii hedduu laafeera; huuqqataniru. Haalli fayyaa isaaniis yaachisaadha. Isarratti dabalata, yeroo mana hidhaa Qiliinxoo turanitti nyaataafi bishaan dhaabanii hedduu sababa miidhamaniif amma haala ulfaataa keessa akka jiran dubbachuu isaanii odeeffadheera” jechuun maddi keenya kun bilbilaan himee jira.
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qabsaa’ota Oromoo bara bulchiinsa TPLf Raayyaa Ittisa biyyaa ganuun waraana fudhatanii gara qabsoo Waraana Biliisummaa Oromootti makaman keessaa nama tokko yoo ta’an, hanga guyyaa har’aattis qabsoo Oromoo utuu hin ganin uummata Oromoof aarsaa kaffalaa jiraachuun, bara Mootummaa Bilxiginnaa keessa marsaa 2ffaaf hidhamuu isaanii ni yaadatama.
Koloneel Gammachuu marsaa duraa himata “yaalii mootummaa fonqolchuu” jedhuun himatamanii, dhumarras himatichi adda ciyuudhaan, ajaja Muummee Ministeera Biyyattiitiin mana hidhaatii gad lakkifamuun isaanii ni yaadatama.
Ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa booda ammoo Koomishiinii poolisii Oromiyaatiin to’atamanii ji’a 4 oliif mana hidhaa Bilxiginnaa Oromiyaa kan Naannoo Yuunvarsiitii Siddist kiiloo jiru keessatti dararamaa erga turanii booda, manni murtii Sulultaa biliisaan akka hiikaman ajaja dabarsinaan, Poolisiin Oromiyaa gara Federaalaatti isaan dabarsuun, himatni isaanii kan waggaa dura adda cite deebi’ee itti banamuu isaa gabaasa Amajji 15 baasneen ibsinee turre.
Gammachuu Ayyaanaa: Qondaalli ABO hidhaa gadhiifaman qabiinsa mirgaa qeeqan
Oduu Ammee! Koloneel Gammachuu Ayaanaa fi hidhamtoonni siyaasa Oromoo kan biroo, ajaja mana murtiin mana hidhaatii akkuma bahaniin polisootaan sirnichaatiin ukkamsamanii
Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Mana hidhaa Qaallittii jiran guyyaa 7ffaaf lagannaa nyaataa
This entry was posted in Uncategorized by kichuu_admin. Bookmark the permalink.